Le Journal du 20 Juin 2022 - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Théatre malgache: la compagnie Miangaly Théatre avec ses acteurs classiques.
- CEPE Antananarivo 2022 : sahirana ireo ray aman-dreny amin’ny fanomanana.
- Manasarotra ny fahazahoana manenjika ny olom-boafidy ny tolo-dalana nolanian’ny Antenimieram-pirenena.
- Electronic’s Day : fampirantiana ireo tetik’asa elektronika nataon’ny mpianatra ao amin’ny sekoly politeknika Vontovorona.
- Teatra Malagasy : Somary takona eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Studio Sifaka · 2022 - 06 - 20 - NY VAOVAO